Universal သည် 6.2 လက်မကားကို DVD Player ကို China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:Universal သည်ကားတစ်စီးကို DVD Player ကို,Universal သည် 6.2 လက်မ Player ကို,Universal သည် 6.2 လက်မ
Home > ထုတ်ကုန်များ > Universal Android Car Dvd > Universal သည် 6.2 လက်မကားကို DVD Player ကို
Universal သည် 6.2 လက်မကားကို DVD Player ကို
Universal များအတွက် 6.2 လက်မကားတစ်စီး DVD player များအတွက် 1. မော်တော်ကား DVD - ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံ:7ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံရရှိနိုင်ပါ။ ဖောက်သည်လည်းနောက်ခံအဖြစ်၎င်းတို့၏ရုပ်ပုံများကိုသုံးနိုင်သည်။
2. Universal များအတွက် 6.2 လက်မကားတစ်စီး DVD player များအတွက်ကားတစ်စီး DVD အဘို့ဤပုံစံသည်ယခုအခါအလွန်တည်ငြိမ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ OEM ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံပါ။ သင်ကလိုဂို, ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI ကိုအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ Universal များအတွက် 6.2 လက်မကားတစ်စီး DVD player ဘို့ဒီကား DVD အဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်အကြောင်းကို 20000 ကိုအပိုင်းပိုင်းတစ်လ, ဒါကြောင့်, ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအမြဲကဒီမှာနှင့်ကူညီပေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Universal များအတွက် 6.2 လက်မကားတစ်စီး DVD player များအတွက် 3.Our ကားတစ်စီး DVD, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်, ရုရှား, ယူကရိန်း, တူရကီ, စပိန်, ဂျာမနီ, ကနေအများကြီးတန်ဖိုး clients များနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့ကြ အီတလီ, အီရန်, ပါကစ္စတန်, ဒူဘိုင်း, အစ္စရေး, ကိုရီးယား, ဆော်ဒီအာရေဗျ, အိန္ဒိယ, ဘရာဇီး, etc ။ Universal ဘို့အားလုံး 6.2 လက်မကားတစ်စီး DVD player များအတွက်ကားတစ်စီး DVD အားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအရမ်းပေါ်ပြူလာဖြစ်ပါတယ်။
4. ယခုငါတို့ 400 ကျော်မော်ဒယ်များအပေါငျးတို့သမော်ဒယ်များအပါအဝင် android ကားကို DVD player ကိုပေး။ တည်ငြိမ်မြန်ဆန်နောက်ဆုံးပေါ် software နှင့်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားကို DVD player ။ အရည်အသွေးအာမခံချက်ပေးရန်, Universal များအတွက် 6.2 လက်မကားတစ်စီး DVD player ဘို့ဒီကား DVD အီး / FCC သည် / RoHs / E-မာကုလက်မှတ်ရှိပါတယ်။ အရည်အသွေးငါတို့ဝိညာဉ်ပါ!
Universal သည် 6.2 လက်မကားကို DVD Player ကို၏ရုပ်ပုံများ:
Universal သည် 6.2 လက်မကားကို DVD Player ကို၏ဆက်စပ်ပစ္စည်း:
Universal သည်ကားတစ်စီးကို DVD Player ကို Universal သည် 6.2 လက်မ Player ကို Universal သည် 6.2 လက်မ Hyundai Verna သည်ကားတစ်စီးကို DVD Player ကို Chery E3 သည်ကားတစ်စီးကို DVD Player ကို Audi A4 သည်ကားတစ်စီးကို DVD Player ကို Hyundai Veloster သည်ကားတစ်စီးကို DVD Player ကို 7.1 စနစ်က Universal သည်ကားတစ်စီးကို DVD Player ကို